Afhayeenka Madasha Xisbiyadda Dalka oo sheegay in Baarlamaanka uu u dhigmo Baarlamaankii dowladdii Kacaanka – Kalfadhi
Afhayeenka KMG ah ee Madasha Xisbiyadda Dalka ee dhawaan lagu dhawaaqay, ayaa sheegay in Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee hadda shaqeeya uu u dhigmo, Baarlamaankii dowladdii Kacaanka.
C/latiif Muuse Nuur (Xildhibaan Sanyare) oo sidoo kale ah xildhibaan hore, ayaa aaminsan in uusan jirin Baarlamaan lagu xisaabtami karo oo go’aana soo saara.
“Baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda ma shaqeeyo, waxaa uuna u dhigmaa Baarlamaankii dowladdii Kacaanka. Baarlamaan hadda shaqeeya oo lagu xisaabtimo ma jiro”.
“Baarlamaankii 80-kii ilaa 90-kii shaqeynayay iyo midka hadda jira waxba isma-dhaamo. Baarlamaanka la-xisaabtan ayuu ku leeyahay xukuumadda haddana lama haayo, wax go’aanna ah kama soo baxo Baarlamaanka”, ayuu haalkiisu sii raaciyay.
Inta la ogyahay, waxaa xusid mudan in golaha shacabka ee Baarlamaanka uu hadda fasax ku maqanyahay, islamarkaanna uu yeesho kullamaddiisa joogtadda ah.
8-ddii July ee sanadkan 2019, Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ansixiyay sharcigii ugu dambeeyay, kaas oo ahaa sharciga xeerka saxaafadda Soomaaliya.
Todobaadkii lasoo dhaafay, madaxda xisbiyada siyaasadda ee dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay madal ay ugu magac-dareen “Madasha Xisbiyadda Dalka.
Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sh. Axmed oo hadda ah hoggaamiyeyaasha xisbiyo siyaasadeed iyo xildhibaanno labada gole ee Baarlamaanka ayaa ka qeyb-gallay kulanka. Xisbiyada ku dhawaaqay Isbaheysiga cusub ayaa waxaa ka mid ah Xisbiyada Wadajir, Himilo Qaran, UPD, Ilays iyo kuwa kale, waxaana ay soo saareen bayaan wadajir ah.